Soomaaliland oo sheegtay in Qadar ay caqabad ku tahay heshiiska DP World. - Caasimada Online
Home Warar Soomaaliland oo sheegtay in Qadar ay caqabad ku tahay heshiiska DP World.
Hargeysa (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Somaliland Muse Bixi Cabdi ayaa u sheegay Jariidad kaso baxda dalka Imaaradka Carabta in dowladda Qatar ay carqaladeynayso heshiiska Somaliland ay la gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaradka.
“Qatar waxay u taagan tahay inay joojiso heshiiska, waa cadawga heshiiska maalgashiga Dekeda Berbera ee DP World”ayuu yiri Madaxweyne Biixi.
Waxaa uu sheegay in Qatar aanay soomaali badan ku sugneyn, taa bedelkeed waxaa uu xusay in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku nool yihiin maalgashadayaal fara badan.
Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay wadaagaan xiriir dhanka badda ah, isagoo xusay in Berbera iyo magaalada Jeddah ay isu jiraan illaa 300KM dhanka Badda.
Horaantii bishan March ayaa Shirkadda DP World heshiis ku saabsan maalgashiga Dekeda Berbera la saxiixatay Somaliland, waxaana heshiiskan uu ahaa mid saddex geesood ah oo lagu qeybsaday saamiga Dekeda, kaasoo u dhaxeeya Itoobiya, DP World iyo Somaliland.